ပွီးလိုကျတော့အဘ – My Blog
အလုပျမှအငွိမျးစားယူပွီး…စား/ဝတျ/နရေေး အစဉျမပွသေော… ဦးသောငျးခနျ့သညျ… မိတျဆှတေဈဦး၏ အကူအညီဖွငျ့ စတေီတဈဆူတှငျ… လုံခွုံရေးဝနျထမျး အလုပျရှိလသေညျ။ လုပျငနျးခှငျတှငျ အလုပျလုပျကိုငျ စဉျ…စိတျတူ/ကိုယျတူ ပွောဆိုမှုအဆငျပွသေော လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ရသလို… အထကျဖါး/အောကျဖိ… ဂုနျးဆငျးဘီးတပျ… နောကျကြောဓါး ဖွဈထိုးသညျ့သူမြားနှငျ့လညျး… တှဆေုံ့ခဲ့ရသညျ။ ကွညျစရာကွညျပွာလေးမြားဖွဈသော… ခြိုခြို၊ ခကျမာနှေး၊ အေးသီတာသိမျ့တို့ဖွဈလညျး… ရငျးနှီးကြှမျးဝငျခဲ့ရသညျ။ ထိုအလုပျတှငျ… ဦးသောငျးခနျ့ မမွဲခဲ့ခြေ ။
အောကျခွဝေနျထမျးအခငျြးခငျြး… ညီညှတျမြှတမှု မရှိသဖွငျ့… ၄/၅လ,အကွာတှငျ… ဦးသောငျးခနျ့ အလုပျထှကျလိုကျလတေော့သညျ။ ဦးသောငျးခနျ့ လငျမယားတှငျ ငိုစား/ရယျစား… ရတာနာလေးမြား လညျးမရှိသညျ့အတှကျ…ရရှိသညျ့… ပငျစငျလစာလေးဖွငျ့… ဘဝကို အေးခမျြးစှာ ဖွတျသနျးကွသညျ။ မြားမကွာမီ… ဦးသောငျးခနျ့ အလုပျလုပျခဲ့သညျ့… စတေီတှငျဘုရားပှဲ တျောကငျြးပလသေညျ။ လငျမယားနှဈဦးတညျးသာနထေိုငျ… ဦးသောငျးခနျ့၏ နအေိမျတှငျ… ဦးသောငျးခနျ့တဈဦးတညျး… အထီးကနျြနသေညျ။ ဦးသောငျးခနျ့၏ ဇနီးဖွဈသူသညျ… ဇာတိကြေးရှာတှငျ… အမှကေိစ်စ လုပျဆောငျစရာရှိသညျ့အတှကျ… ဇာတိမွသေို့ ပွနျသှားသောကွောငျ့… ဦးသောငျးခနျ့မှာ… တဈကိုယျတညျးဖွဈနသေညျ။ တဈကိုယျတညျးဖွဈနသေညျ့… ဦးသောငျးခနျ့သညျ… နံနကျနိုးသညျနှငျ့ တဈကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျပွီး ဘုရားဝတျပွုသညျ။
ပွီးသညျနှငျ့ စားသောကျခကျြပွုတျသညျ။ tvမှ သတငျးမြားနားထောငျသညျ။ ကိုရီယားဇာတျလမျးတှဲမြားကွညျ့သညျ။ သီခငျြးနားထောငျသညျ။ တရားCDမြားဖွငျ့… တရားနာသညျ။ ပွီး… မကျြခှံလေးလာသညျ့အခါ အိပျသညျ။ ဇနီးဖွဈသူရှာပွနျသှားသညျမှာ ၈ရကျခနျ့ကွာပွီဖွဈသညျ။ အတူရှိနစေဉျလညျး… အသကျအရှယျကွီးမွငျ့လာသညျကို… အကွောငျးပွလကျြ…ဖို/မ ဆကျဆံရေးမရှိခဲ့ခြေ ။ ယနေ့…ဦးသောငျးခနျ့… အိပျယာအဝငျစောခဲ့သညျ။ အိပျမကျ မကျသညျ။ မကိုးမကား… အမြိုးသ်မီးတဈဦးနှငျ့ ကာမ ဆကျဆံသညျ… ဟုမကျသညျ။ လနျ့နိုးလာသညျ့အခါ… ဆီးကွောမြား တငျးပွီးဆီးသှားခငျြလာသညျ။ သို့ဖွဈ၍… ဦးသောငျးခနျ့သညျ ရအေိမျသို့သှားကာ ဆီးသှားသညျ။ ထို့နောကျ အိပျယာသို့ပွနျကာ… ဝငျအိပျသညျ။ ဟိုလှိမျ့/ဒီလှိမျ့ ဖွငျ့… အိပျမပြျောပေ။ အိပျမကျထဲမှ အမြိုးသမီးကိုမကျြနှာ မသဲကှဲသျောလညျး… တဏှာစိတျဆိုသညျက… ပူးကပျလာပွီဆိုလြှငျ… ဖယျထုတျလို့ မရခငျြ။ ထို့ကွောငျ့ဦးသောငျးခနျ့…အိပျရနျ မကွိုးစားတော့ပေ။ အပွာကားကွညျ့ပွီး လကျသမားလုပျရနျလညျး… နှမွောနသေညျ။
သို့ဖွဈ၍ အိမျတံခါးလုံခွုံစှာ သော့ခတျပွီး… အပွငျသို့ လမျးလြှောကျထှကျလာတော့သညျ။ အတနျကွာ လမျးလြှောကျမိသညျ့အခါ… မီးရောငျထိနျထိနျကို လှမျးမွငျရသဖွငျ့… ဘုရားပှဲမှ မီးဖွဈမညျဟု… တှေးမိလသေညျ။ အတှေးနှငျ့အတူ ခွဦေးသညျလညျး ဘုရားပှဲဆီသို့… ဦးတညျသှားလတေော့သညျ။ ပှဲဈေးတနျးနှငျ့နီးလာသဖွငျ့…လူသှား/ လူလာ စိပျလာသညျ။ ဈေးတနျးအတှငျး စဝငျမိသညျနှငျ့… ဝဲ/ယာ မုနျ့ဆိုငျမြားနှငျ့ ပစ်စညျးမြိုးစုံရောငျးသညျ့ ဈေးဆိုငျမြားကို ငေးယငျး ကွညျ့ယငျးဖွငျ့… လူရစေီးခြောငျးအတှငျး… စီးမြောသှားလေ၏။ အိုးကွီး/ အိုးလတျ/ အိုးငယျမြားကိုလညျး ရှာဖှကွေညျ့ရှု့မကျြစိကြှေးယငျး… လြှောကျလာခဲ့ရာ… နံမညျကွီးဇာတျပှဲရုံတှအေနီး ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။ ဆကျ၍လြှောကျလာခဲ့ရာ… ဗလာပှဲနှငျ့ စတိတျရှိုးစငျမြားအနီးသို့… ရောကျလာပွနျသညျ။
ရှမှေ့လြှောကျနသေညျ့တောငျ့တငျးသညျ့… အိုးလတျနှဈလုံးသညျ… ကွိတျကွိတျတိုးနသေညျ့… စတိတျရှိုးလူအုပျကွားအတှငျးသို့… တိုးခှဝေ့ငျသှားကွသဖွငျ့… ဦးသောငျးခနျ့ပဈမှတျ ပြောကျသှားခဲ့သညျ။ ရပျကွညျ့ရနျလညျး အတနျငယျဝေးနေ… စကားပွောသလိုလို သံခပျြထိုးသလိုလို… မပီမသသီခငျြးသံမြားကွောငျ့ စငျနှငျ့နီးရာသို့ထပျရှမေိ့၏။ တငျမာနှေးသညျ စတိတျရှိုးကို စိတျပါဝငျစားနစေဉျ မိမိတငျပါးကို လကျလာသရမျးသဖွငျ့… မသိမသာ နောကျသို့ငဲ့ကွညျ့လိုကျရာ… မိမိနှငျ့အသကျအရှယျ မတိမျးမယိမျးရှိမညျ့ အမြိုသားနှဈဦးဖွဈနသေညျ။ မသိဟနျဆောငျလကျြ ဆကျကွညျ့နစေဉျ… ပူပူနှေးနှေး အခြောငျးဖွငျ့… အထောကျခံရလသေညျ။ တငျမာနှေးသညျ… အိမျထောငျကသြညျမှာ ၂နှဈ မပွညျ့သေးခြေ ။ ဖို/မ ဆကျဆံရေးတှငျ… ဘှဲ့ရတဈဦးအဆငျ့ မဟုတျပမေဲ့… အထကျတနျးအောငျပွီး အဆငျ့လောကျ… အတှအေ့ကွုံ ရှိသူတဈယောကျဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ နောကျမှထောကျနသေညျ့… ပူနှေးနှေး အခြောငျးကွီးသညျ… ဘာဖွဈသညျဆိုတာကို သိသညျ့အပွငျ… ယခုထကျ အဆငျ့ကြျောလာနိုငျသညျကိုလညျး… ရိပျစားမိသဖွငျ့… မိမိလညျး အန်တရာယျမဖွဈအောငျ… ရှောငျထှကျနိုငျရနျအတှကျ… မသိမသာ မကျြလုံးကစားလကျြ ထှကျပေါကျရှာနေ၏။ ထိုအခြိနျမှာပငျ… လကျတဈဖကျသညျ မိမိဆီးခုံကို ထမိနျပျေါကပငျ လာစမျးသဖွငျ့… လကျသညျးဖွငျ့ ဆိတျလိုကျရသညျ။ လူအုပျ၏အပွငျဖကျတှငျ… ဦးသောငျးခနျ့ကို လှမျးမွငျတှလေို့ကျရသဖွငျ့… “အဘရေ…အဘ… သမီးဒီမှာ… ထှကျလာခဲ့မယျ…” ထှကျဖို့ပွငျသညျ့အခါ…အနောကျမှနေ… လကျမောငျးကို ဆှဲထားသွဖွငျ့… “ဘယျလိုဖွဈနကွေတာလဲ…ဟိုမှာ ငါ့ဘကွီး လာချေါနပွေီ… နငျတို့မလှတျယငျ ပွဿနာတကျသှားမယျနျော…” ဦးသောငျးခနျ့သညျအဘဟုချေါသံကို ကွားသျောလညျး… မိမိကိုချေါသညျဟုမထငျပေ။
သို့သျော အသံကိုကွားဖူးသလိုရှိသဖွငျ့ လှမျးကွညျ့ရာ… တငျမာနှေးကိုမွငျမိသှားသညျ။ တငျမာနှေး၏ အခကျအခဲကိုလညျး ရိပျမိလိုကျသဖွငျ့… လူအုပျအနီးတိုးကပျသှားကာ… “ထှကျခဲ့လေ…သမီး…အဘရှာလိုကျတာ…” ထိုအခါမှ…လူငယျနှဈယောကျသညျ… မလှတျခငျြ/လှတျခငျြဖွဈ…လှတျပေးလိုကျသညျ။ တငျမာနှေးလညျး ရငျတုနျ/ပနျးတုနျဖွငျ့… ကောကျရိုးတဈမြှငျ… ကယျတငျရှငျ ဦးသောငျးခနျ့ရှိရာသို့… ထှကျလာနိုငျတော့၏။ “လာ…အဘ သှားမယျ…” ဟု…ပွောကာ…ဦးသောငျးခနျ့၏ ညာလကျမောငျးကို ကိုငျလကျြလြှောကျလာခဲ့သညျ။ အတနျငယျ လြှောကျလာသညျ့အခါ … “ဟငျ…အဘ,ဒီသီခငျြး…သမီးကွိုကျတယျ… ခဏနားထောငျကွညျ့မယျနျော…” ပွောလညျးပွော… ဦးသောငျးခနျ့ကိုလညျး… ဆှဲချေါကာ လူကွားအတှငျးသို့ တိုးဝငျလသေညျ။ စငျနားနီးသဖွငျ့… အတှငျးသို့ သိပျမတိုးနိုငျခြေ ။
ရောကျသညျ့နရော၌ပငျ စငျပျေါကို ကွညျ့ဖွဈကွသညျ။ တငျမာနှေးသညျ ဦးသောငျးခနျ့ကို… အနောကျဖကျတှငျ ထားကာ… စငျပျေါကိုငေးမောကွညျ့ရှု့ယငျး… မိမိရှတှေ့ငျ လူကှယျသညျ့အခါ… ခွဖြေားထောကျကာ ထောကျကာ ကွညျ့ရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မကွာခဏ တငျမာနှေး၏တငျပါးနှငျ့ ဦးသောငျးခနျ့၏ဆီးခုံတို့ ပှတျတိုကျမိကွလသေညျ။ ပှတျတိုကျမှုမြားလာသညျ့အခါ တာဝနျအရ… လီးရမညျဖွဈသျော… အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့သူဖွဈသညျ့… ဦးသောငျးခနျ့မှာ… တောငျသျောလညျး လူငယျကဲ့သို့… ထောငျမတျမနပေေ။ မာမာတငျးတငျးတော့ ဖွဈလာသညျ။ တငျမာနှေးမှာ မကွာမီက ရှယျသူလူငယျနှဈ၏ ကိုငျတှယျခံရမှု… အထောကျခံရမှုတို့ကို တှေ့ ကွုံခဲ့သျောလညျး… ကွောကျစိတျကွောငျ့ မညျသညျ့ခံစားမှုမြှ မရှိခဲ့ခြေ ။
သို့သျော… ယခုအခါ… ဦးသောငျးခနျ့၏ မာမာအခြောငျးကွီးဖွဈ မိမိတငျပါး ပှတျတိုကျမိသညျ့အခါ… စိတျလှုပျရှားလာမိသညျ။ ခွဖြေားထောကျကာ ထောကျကာ ကွညျ့ရသညျ့ အတှကျလညျး… တငျပါးနှငျ့ မာမာအခြောငျး ကွီးတို့၏ အထိအတှကေို့နှဈသကျလာသညျ။ ဦးသောငျးခနျ့သညျ အသကျကွီးလာသဖွငျ့… အတှငျးဘောငျးဘီဝတျလဝေ့တျထ… မရှိတော့ခြေ။ တငျမာနှေးကိုလညျး…စတငျတှမေိ့… ခငျမငျစအခြိနျကတညျးက… တငျမာနှေး၏ စှငျ့ကားလှပသော အိုးကွီးကိုကွညျ့ပွီး… ပွဈမှားနသေူ ဖွဈသညျ။ တငျမာနှေးသညျလညျး ဦးသောငျးခနျ့နှငျ့ စတငျခငျမငျမိကတညျးက… မိမိအပျေါ မရိုးမသားအကွညျ့တို့ကို… သတိပွုခဲ့မိသျောလညျး… စိတျကထူးဆနျးစှာ သဒ်ဓါကွညျဖွူနမေိသညျ။
မိမိ၏ သူငယျခငျြးမြားဖွဈကွသညျ့… ခြိုခြိုနှငျ့ အေးသီတာသိမျ့တို့ထံမှ ကွားသိရသညျ့… ဦးသောငျးခနျ့နှငျ့ ခြိုခြိုတို့ V.I.P.သနျ့စငျခနျးတှငျ… ကာမဆကျဆံမှု… အေးသီတာသိမျ့ပါ… ထိုသနျ့စငျခနျး၌ပငျ… ဦးသောငျးခနျ့နှငျ့ တဏှာလှနျကြူးကွသညျမြားကို… ကိုယျတိုငျကိုယျကြ… ပွောပွခဲ့ကွသညျ။ ထိုစဉျကတညျးက… ဦးသောငျးခနျ့ကို တငျမာနှေး မသိစိတျကနေ သဒ်ဓါလှနျနခေဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ယခုလိုမိမိတငျပါးကို… ဦးသောငျးခနျ့၏ မာမာအခြောငျးကွီး အမွှောငျးလိုကျ ကပျနသေိအခါ… လိုလိုခငျြခငျြပငျ ဖငျကိုမသိမသာ နောကျပဈပေးထားမိသညျ။ ဦးသောငျးခနျ့သညျ အခွအေနအေစဉျပွနေသေဖွငျ့ တငျမာနှေး၏ပုခုံးကိုကိုငျကာ မိမိဆီးခုံဖွဈ တငျပါးကို ဖိကပျထားသညျ။
တငျမာနှေးလညျး လကျနောကျပဈ၍ ဦးသောငျးခနျ့ခါးကို ကိုငျထားသညျ။ ကွာလာသညျ့အခါ တငျမာနှေး၏ ပိပိအတှငျးဝယျ ကာမရှပွေ့ေးအရညျကွညျတို့ ယိုဖိတျလာလတေော့သညျ။ “အဘ လူသိပျကွပျလာပွီ…ပွနျကွရအောငျနျော..” တငျမာနှေးသညျပွောဆိုပွီးနှငျ့ လူအုပျကွားမှ တိုးထှကျနသေဖွငျ့.. တငျမာနှေး လူအုပျကွားအတှငျးမှ တိုးထှကျသှားသဖွငျ့… ဦးသောငျးခနျ့လညျး နောကျကနေ လိုကျသှားရလေ၏။ “အဘ ဗိုကျဆာတယျ…တဈခုခုသှားဝယျရအောငျ…” တငျမာနှေးမုနျ့ဈေးတနျးသို့… သှားသဖွငျ့ လိုကျရပွနျသညျ။
တငျမာနှေးသညျ ရမေုနျ့ဆိုငျတှငျ… ရမေုနျ့အနညျးငယျဝယျပွီး… ကောကျညှငျးကညျြတောကျဆိုငျတှငျ… ကောကျညှငျးကညျြတောကျ ဝယျပွနျသညျ။ ထို့နောကျ…ရသေနျ့၎ဗူးနှငျ့ တဈရှုး ၂လိပျဝယျပွီး… “လာလေ…အဘ…သှားကွရအောငျ……” တငျမာနှေး ချေါရာနောကျသို့ ကောကျကောကျပါအောငျ… ဦးသောငျးခနျ့ တဈယောကျလိုကျမိခပြွေီ။ အတနျငယျသှားပွီးနောကျ… ကတ်တရာလမျးမှ သှဖေညျကာ… အနီးရှိစကျရုံကွီး တဈခုသှားရာလမျးကို… တငျမာနှေး ဦးတညျလိုကျသဖွငျ့… ဦးသောငျးခနျ့လညျး… သို့လော/သို့လော တှေးရခပြွေီ။ ထိုလမျးသညျ အနီးပတျဝနျးကငျြရှိ… နထေိုငျသူမြား အခြို့သာ အသုံးပွုသောလမျးဖွဈလသေညျ။ အန်တ ရာယျမရှိသျောငွားလညျး… လူသှား/ လူလာ ကွဲ သောလမျးဖွဈလသေညျ။
ကားမှတျတိုငျ ၂တိုငျလောကျအကှာ အဝေးရှိမညျ့ နရောအရောကျတှငျ… ပိတောကျပငျကွီး တဈပငျရှိလသေညျ။ ထိုပိတောကျ ပငျစညျပတျလညျကို… သဈသားခုံပတျလညျး ရိုကျထား၏။ “အဘ…ဒီမှာခဏအမောဖွယေငျး… မုနျ့စားကွရအောငျနျော…” ဦးသောငျးခနျ့လညျး…အိမျမှ စထှကျကတညျးက… မထိုငျရသေးသဖွငျ့… ဟနျပငျမဆောငျနိုငျ… ခွပေဈလကျပဈ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ “အဘ တျောတျောမောသှားလား?” “မောတာပေါ့ သမီးရယျ…အိမျကနေ လမျးလြှောကျထှကျလာခဲ့တာလေ… ပှဲခငျးထဲလဲ မတျတပျ မတျတပျနဲ့… ဒီရောကျမှပဲ ထိုငျရတော့တာ…” အဘက လူကသာမောတာနျော… အခုနက အဘ ပစ်စညျးကွီးက…အဟငျးဟငျး..”
“အေးကှယျ…သမီးတငျပါးကွီးကလဲ အိနတောပဲ ဆိုတော့…” “သိပါတယျနျော…အဘအလုပျဝငျကတညျးက… သမီးကိုရှိုးနတော…” “အေးကှယျ…သမီးက ခါးလေးသိမျပွီး… ရငျရော/တငျကော လှတဲ့အပွငျ… မကျြနှာလေးကပါ ခဈြစရာကောငျးနတောကိုး…” “အဘသိပျမွှောကျမနနေဲ့…ဒီမှာဝယျလာခဲ့တဲ့ မုနျ့တှစေား…” တငျမာနှေးသညျစားဦးစားဖြား ရမေုနျ့ကို… ဦးသောငျးခနျ့ အား လှမျးပေးသညျ။ တငျမာနှေး ကိုယျတိုငျလညျး… ရမေုနျ့စားလသေညျ။ ရမေုနျ့မှာ အရသာရှိသျောလညျး… ဗိုကျမပွညျ့သညျ့အတှကျ… ကောကျညှငျးကညျြတောကျကို… ဆကျစားကွသညျ။
တငျမာနှေးမှာ အစားစားစဉျ… နငျမှာစိုးရိမျ၍… ရေ တဈကွိမျ… နှဈကွိမျသောကျသျောလညျး ဦးသောငျးခနျ့ကတော့… အစာစားပွီးမှ… ရသေောကျလသေညျ။ “အဘ ဗိုကျပွညျ့ပွီး…ဗိုကျလေးသှားပွီ… အဘပေါငျပျေါမှာ… ခဏ လှဲမယျနျော… အဘဟာကွီး တောငျနသေေးလား…” တငျမာနှေး သညျ ဦးသောငျးခနျ့၏ ပေါငျပျေါ လှဲအိပျယငျး… လီး ကိုလှမျးကိုငျကွညျ့သညျ။ “ဟငျ…အခုကတြော့…သူမဟုတျသလိုပဲ…” ပုဆိုးပျေါကနေ…လီးကိုကိုငျယငျးပွောနသေညျ။ “အာငှပေ့ေးလိုကျမယျနျော…အဘ” ပွောလညျးပွော… ပုဆိုးကိုလညျး ဆှဲလှနျလိုကျ၏။ တငျမာနှေး၏အာငှကွေ့ောငျ့လညျးကောငျး ပုလှမှေုတျမှုကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့လညျးကောငျး အဖိုးကွီး ဦးသောငျးခနျ့၏လီးသညျ မယုံနိုငျစရာ တောငျ့တငျးမာကွောလာလသေညျ။
ဦးသောငျးခနျ့သညျလညျး တငျမာနှေး မိမိပေါငျပျေါတှငျ လဲလြောငျးလကျြ မိမိလီးကိုပုလှမှေုတျနစေဉျကပငျ တငျမာနှေး၏ နို့အုံနှငျ့တငျသားအစိုငျအခဲကွီးမြားကို ဖဈြညှဈကိုငျတှယျနခေဲ့သညျ။ “နှေးရယျ..ဘာဂြာမှုတျခငျြလိုကျတာ……” ဟု..ဦးသောငျးခနျ့က တငျမာနှေးကို တိုးတိုလေး ကပျပွောလသေညျ။ “အူး..အဘ သဘောပဲလေ….” လီးကိုငုံလကျြပုလှပေေးမပကျြ တငျမာနှေးက ဖွလေိုကျသညျ။ ဦးသောငျးလညျး တငျမာနှေး၏ ထမိနျစကိုခါးပျေါထိဆှဲလှနျတငျလိုကျပွီး တငျသားတငျးတငျးရငျးရငျးမြားကို၊ လြှောကျနမျးလြှောကျစုပျယငျး၊ ပေါငျနှဈလုံးကွားရှိ စောကျဖုတျကိုလညျး ဖှဖှလေးလကျပူတိုကျနေ၏။ တငျမာနှေးလညျး ပေါငျနှဈဖကျကိုမသိမသာ ကားပေးလိုကျသညျ။
ဦးသောငျးခနျ့ကလညျး ပှငျ့အာလာသညျ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားမြားကို၊ လြှာဖွငျ့ လြှကျလတေော့သညျ။ ဖငျတုံးကွီးမြားကိုလညျး၊ ဖဈြညှဈကိုငျတှယျလကျြရှိသညျ။ ပုလှကေောငျးမှုကွောငျ့ မာတောငျတောငျ့တငျးလာသညျ့ လီးကွီးဖွငျ့၊ တငျမာနှေး၏စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးကို လိုးခငျြလာသလို၊ စောကျဖုတျအတှငျးသားနှငျ့ စောကျစိတို့ကိုစုပျ/မှုတျ/ လကျြ လုပျပေးမှုကွောငျ့ ထှကျရှိလာသညျ့ စောကျရညျမြားကိုလညျး တပွတျပွတျလြှကျကာ၊ အလိုးကွီးလိုးကွရနျ၊ နှဈဦစလုံးထနျနကွေပွီ ဖွဈသညျ။ “ကလေး….အဘ..လိုးတော့မယျကှာ….. ဒီ ခုံပျေါမှာ ဒူးထောကျပွီးအဘ ဖကျကိုဖငျပေးထား……” တငျမာနှေးသညျ.. ဦသောငျးခနျ့နခေိုငျးသညျ့အတိုငျး.. ပိတောကျပငျကိုမကျြနှာပွကာ ဦးသောငျးခနျ့ကို ကြောပေးလကျြ.. ထမိနျကို ခါးထိဆှဲတငျထားသညျ။
ဦးသောငျးခနျ့သညျမတျတပျရပျလကျြ ခုံပျေါတှငျ မိမိကိုကြောပေးလကျြ အလိုးခံရနျအစဉျသငျ့ဖွဈနသေညျ့ စောကျဖုတျအတှငျးသို့ မိမိလီးကိုလြှောကနဲ ထိုးသှငျးလိုကျလတေော့သညျ။ ” ဗွဈ…..ဗွှတျ..,ဗွှတျ…..” အသံနှငျ့အတူ….လီးကွီးသညျ စောကျဖုတျအတှငျးနှုတျခမျးသားကို.. ပှတျတိုကျခြိတျဆှဲကာ.. အဆုံးဝငျရောကျသှားလတေော့သညျ။ တငျပါးနှဈဖကျကို အားရပါးရကိုငျကာ.. ခပျသှကျသှကျကလေးဆောငျ့လိုးမှုကွောငျ့…. ” ဖှတျ…ဖတျ….ဖတျ…ဗွှတျ….ဖှတျ…..” စညျးခကျြသံနှငျ့အတူ… ” အား….အငျ့..အငျ့..အဟငျ့ဟငျ့…အူး….” ဖီးလျ..တကျသံထှကျလာသညျ။ “အငျး..အု…အု…ဆောငျ့..အဘ….ဆောငျ့..ဆောငျ့.. မီးပွီးတော့မယျ…. အိုး…ကောငျးလိုကျတာရှငျ….” တငျပါးကိုနောကျသို့ အစှမျးကုနျတိုးကပျထားယငျး… တငျမာနှေး.. တဈခြီပွီးလပွေီ။ ဦသောငျးခနျ့ကလညျး လီးကိုအဖုတျအတှငျးသို့.. တငျးကွပျစှာ ဖိကပျလကျြ.. မှပေေးနေ၏။ တငျပါးကွီးနှဈဖကျကိုလညျး ပှတျသပျဖဈြညှဈယငျး.. လီးကိုဖွေးညှငျး စှာအထုတျ/ အသှငျးပွနျလုပျလသေညျ။
တဏှာစိတျတကျနသေညျ့တငျမာနှေးက “အဘ….သမီးကိုနမျးပါအုနျး….” အရှိနျဖွေးစှာထိနျးလိုးနယေငျး…တငျမာနှေး၏နှုတျခမျးကို ဆှဲယူစုပျနမျးလတေော့သညျ။ နှဈဦးသား အားရအောငျကဈဆငျဆှဲပွီးနောကျ.. နို့နှဈလုံးကိုဆုပျကိုငျလကျြ အရှိနျပွငျးစှာ လိုးလတေော့သညျ။ “အား…လိုး…လိုး..အဘ….အဘ..လရညျတှေ ထှကျလာအောငျ.. နာနာတာဆောငျ့လိုးပါအဘရယျ…..” “ဗွဈ…ဖှတျ..ဖတျဖတျ……….” လိုးသံမြားနှငျ့အတူ. တငျမာနှေး.စောကျခေါငျးအတှငျး၌ ပူကနဲ..ပူကနဲဖွဈကာ.. သုတျရညျမြားဝငျရောကျလာတော့သညျ။ “အငျ့…ဟငျ့ဟငျ့…သ..သမီးလဲ..ထပျ..ထပျပွီးပွနျပွီတော့….” ဦးသငျေးခနျ့နငျ့တငျမာနှေးတို့သညျ ပနျးတိုငျသို့ရောကျရှိပွီးဖွဈသျောလညျး ဝကျမှိနျး မှိနျးနကွေကာ အဖုတျအတှငျးလီးကိုစိမျလကျြ တစိမျ့စိမျ့အရသာခံစားနသလေို လီးကို အစိမျခံလကျြ စောကျဖုတျကလညျး လီးအရသာကို တ‌မွေ့‌မွခေံ့စားနကွေလသေညျ။ အတနျငယျ အမော‌ပွေ၍ လီးကပြော့ခှထှေကျကလြာမှသာ “အဘ ရဆေေးကွရအောငျနျော” အေးလေ ဆေးကွတာပေါ့” နှဈဦးသားရသနျေ့တဈဗူးစီကိုငျလကျြ ပိတောကျပငျအနီးဝနျးကငျြတှငျ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျကွလတေော့သညျ။
ရဆေေးပွီးသှားသညျ့အခါ မူလခုံပျေါတှငျ ပွနျထိုငျကွလသေညျ။ “ခြိုခြိုပွောတာမှနျတယျ အဘရဲ့” “ဘာလဲဟ နငျကလဲ အရငျးမရှိ အဖြားမရှိ” “ဟီး ဟီး အဘကလဲ ခြိုခြိုက‌ သမီးကို ‌ပွောပွတယျ အဘက အသကျကွီးပမေဲ့ လိုးနိုငျတုနျးပဲတဲ့” “အျော သမီးရယျ မလိုးရတာ နဲနွဲကာသှားပွီလေ သမီးကလဲ အစစအရာရာ စှဲဆောငျမှု ကောငျးနတေော့ နောကျတဈခြီတောငျ လိုးခငျြသေးတယျ” “အောငျမယျ အောငျမယျ ကွိုတငျစရံ ခြိတျနပွေနျပါပွီနျော” “အဟုတျ‌ပွောတာသမီးရဲ့ သမီး တငျတှေ ရငျတှကေတငျး တငျးရငျးရငျးနဲ့ အခြိုးကကြလြေး ဖွဈနတေော့ အဘလေ သမီးကို လိုးပွီးယငျး လိုးခငျြပဲကှာ” ဦးသောငျးခနျ့သညျ စကားတ‌ပွော‌ပွောနှငျ့ ဘယျဖကျဘေးတှငျ ကပျထိုငျနသညျေ့ တငျမာနှေး ၏နို့အုံကို အကငြ်္ီအပျေါကနေ ဆုပျနယျနတေော့သညျ ။
“အဘ ခြိုခြိုနဲ့ ဘယျနှယျခါတောငျ လိုးပွီးပွီလဲ” “ဟာ ညညျးကလဲ လဈယငျလဈသလို တှနေ့ကွေတာ ဘယျလိုလုပျ မှတျမိမှာလဲ” “ဒါဆို အေးသီတာသိမျ့ကို လိုးတာလဲ မရတှေကျနိငျတော့ဘူးပေါ့ တျောတျောဆိုးတဲ့ အဘ” တငျမာနှေးသညျ ဦးသောငျးခနျ့၏လီးကို ပုဆိုးပျေါမှ ဆှဲကိုငျကာ ညှဈဆှဲ ဆှဲလိုကျသဖွငျ့ “အ–အ–‌ဖွေး‌ဖွေးလုပျပါဟ” ဦးသောငျးခနျ့သညျ ခြျောလဲ လဲထိုငျလုပျ၍ တငျမာနှေးအဖုတျကို ညာလကျဖွဈနှိုကျလိုကျသညျ။ ထမိနျအပျေါကနေ အဖုတျကို လြောတိုကျ ပှတျတိုကျနသညျေ့အပွငျ ဘယျလကျကလညျး တငျမာနှေး ၏ ဘယျနို့အုံကို ဖဈြညှဈနယျဖတျနသေညျ။ “အို အဘ နျော သမီး အဝတျအစားတှေ ‌ကွမှေကုနျပါပွီ… ဟာ မရဘူး မရဘူး အဘ လဲ အဝတျအစားတှခြှေတျ သမီးလဲ ခြှတျမယျ” တငျမာနှေးသညျဦးသောငျခနျ့လကျမြားကို တှနျးဖယျပွီး မတျတပျရပျကာ ကိုယျပျေါရှိ အဝတျအစားကို ခြှတျလသညျေ။
ဦးသောငျးခနျ့လညျး တငျမာနှေး၏ ကိုယျလုံးတီးအလှကို ရငျသပျရှုမောစှာ ငေးကွညျ့နမေိသညျ။ “ဟာ—-အဘ ခြှတျလကှော သူမြားဟာကို လာငမျးနသေေးတယျ” ဦးသောငျးခနျ့လညျး ပုဆိုးကိုခြှတျကာ ခုံျေါတငျလိုကျသညျ။ ” ကွညျ့ လူလညျကွီး အကငြ်္ီကတြော့ မခြှတျဘူး” “လာပါ သမီး ရယျ အဘ ဂြာခငျြနပွေီ ” ” အဘ နျော သမီး ကို ငရဲမပေးနဲ့” ” ငရဲမပေးဘူး လြှာပေးမှာ ဟ ” တငျမာနှေးခုံပျေါထိုငျသညျနှငျ့ ဦးသောငျးခနျ့သညျ‌ မွပေျေါဒူးထောကျကာ ပေါငျနှဈလုံးကွားသို ခေါငျးဝငျရလောကျလေးတော့သညျ။ ” အိုး—ဘယျလိုမှလဲ ‌ပွောမရ ဆိုမရ အငျ့_အ.အ–အိုး———” လကျမ နှဈဖကျဖွငျ့ အဖုတျနှုတျခမျးသားမြားကို ဖွဲကာ လြှာဖွငျ့ အထကျ/အောကျ စုနျ/ဆနျ ဂြာလတေော့သညျ။ ” အိုး–စုပျ–စုပျ–အစိကိုပါ သိမျးကွုံးစုပျလိုကျစမျးပါ အဘ ရယျ ” တငျမာနှေးသညျ ဦးသောငျးခနျ့၏ ဆံပငျမြားကို ဆုပျကိုငျယငျး ဖငျကွီး‌မွှောကျကွှ‌မွှောကျကွှဖငျ့ ကာမ အရညျမြားထှကျရနျ တာစူနပွေီဖဈသညျ။
ဦးသောငျးခနျ့က အစိကိုစုပျယငျး နို့သီးခေါငျးလေးမြားကို ပှ‌တျ‌ခွသေောအခါ တငျမာနှေးမှာ ထှနျ့ထှနျ့လူးလကျြ ” အီး——ဟ,ဟ–ပွီးပွီ အဘ‌ရေ ပွီးပွီ ” အဖုတျအတှငျးမှထှကျကလြာသညျ့ သုတျရညျမြား ဦးသောငျးခနျ့လြာဖွငျ့ ကွုံးလြှကျလတေော့သညျ။ စောကျရညျမြားမစငျတစငျ အခြိနျတှငျ ဦးသောငျးခနျ့သညျ မတျတပျထရပျပွီး သုတျရညျအရသာ‌ကွောငျ့ အနညျးငယျမာလာသညျ့ လီးကို ဂှငျးထုခိုငျးလသညျေ။ တငျမာနှေးလညျး ဂှငျးထုပေးယငျး ကဈဆငျဆွှဲကလသညျေ။ ငယျရှယျတောငျ့တငျးသညျ့ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျကို ထပျမံလိုးရတော့ မညျဆိုသော အသိစိတျ‌ကွောငျ့ လီးသညျ မကွာခငျ မာ‌ကွောလာလသေညျ။
တငျမာနှးလညျး ကဈဆငျဆှဲနစေဉျ အဘပါးစပျမှ မိမိစောကျရညျနံ့တှကေို ရနေ၏။ ခဏ အကွာတှငျ ကဈဆငျဆွှဲခငျးကို နားလိုကျကွပွီး လိုးရနျပွငျ ကွတော့သညျ။ ဦးသောငျးခနျ့သညျ တငျမာနှေး ၏ညာ‌ခွကေို မိမိဘယျပုခုံးပျေါ ထမျးလိုကျသညျ။ မိမိညာ‌ခွကေို ခုံပျေါအားပွုလိုကျသညျ။ ဟ,ပွဲဖွဈသော စောကျဖုတျအတှငျးသို့လီးထညျ့ရနျကွိုးစားစဉျ တငျမာနှေးက အလိုကျသိစှာ လီးကိုလှမျးကိုငျပွီး အဖုတျ ဝတပေ့ေးလသေညျ။ ပှငျ့အာနသော စောကျဖုတျအတှငျးသို့ဇှပျ –ဗွှတျ အသံနှငျ့အတူ လီးက ‌ဖွောငျ့တနျးစှာ ဝငျရောကျလတေော့သညျ။ အရှိနျပွငျးစှာ တဈခကျြ အဆောငျ့တှငျ ” အှတျ–အငျ့ အငျ့ အ ဘ ခြိုခြိုနဲ့ အေးသီတာသိမျ့တို့ကိုရော ဒီလိုပဲ ဆောငျ့လိုးသလား ” “အငျး တခါတလတေော့ ဆောငျ့လိုးဖွဈတာပေါ့ ”
“ဟုတျ–အငျး–သမီး လဲ အဘ တခကျြတခကျြ ဆောငျ့ ဆောငျ့ လိုးတာ– အ– ခံ ခံ လို့ကောငျးတယျရှငျ့—” ဦးသောငျးခနျ့သညျ နို့ကိုပါ ကုနျးစို့လိုကျသဖွငျ့ “အိုး——သ သ မီး ပွီ ပွီး ပွနျပွီတော့——” တငျမာနှေးသညျ ဦးသောငျးခနျ့ခါးကို မမှီတမှီ လှမျးဖကျကာ နောကျပေါငျတဈခြောငျးကိုပါ ညာပုခုံးပျေါတငျလိုကျသဖွငျ့ ဦးသောငျးခနျ့လညျး ညာ‌ခွကေို အောကျခလြိုကျရလသေညျ။ အတငျးကာရော ဆှဲဖကျထားကွသဖွငျ့ ဆီးခွုံခငျး ထိကပျနတေော့၏။ နှဈဦးစလုံးစညျးခကျြညီညီ ဖငျဝှနေ့ကွေတော့သညျ။ ထို့နောကျ ဦးသောငျးခနျ့က ‌ဖွေး‌ဖွေးမှနျမှနျလေး ပွနျလိုးယငျး စောကျဖုတျအတှငျးသို့သုတျရညျပူမြား ပနျးထုတျနိုငျရနျ ကွမျးကွမျး ဆောငျ့လိုးရပွနျသညျ။ ” အိုး—အငျ့ အငျ့ အ အငျး ဟငျး ပွီး ပွီး လိုကျတော့ အဘ——” ပူကနဲ ပူကနဲ သုတျရညျမြား အဖုတျအတှငျးဝငျခြိနျနှငျ့ မရှေးမနှောငျးမှာတငျ တငျမာနှေးလညျး တဈခြီထပျပွီးပွနျသညျ။ အတျောကွာကွာ အနားယူကွပွီးနောကျ တငျမာနှေးကို ခုံပျေါတှငျ ပုဇှနျထုပျကှေးခိုငျးလကျြ စိမျလိုးကွပွနျလပွေီ။ ဦးသောငျးခနျ့သညျ ဤကဲ့သို့ သမီးအရှယျ ‌မွေးအရှယျကလေးမလေးသုံးဦးအား လိုးခဲ့ရခွငျး‌ကွောငျ့ မရှယျပဲ စျောကဲမငျး ဖွဈခဲ့ရလသေညျ ………ပွီးပါပွီ။
အလုပ်မှအငြိမ်းစားယူပြီး…စား/ဝတ်/နေရေး အစဉ်မပြေသော… ဦးသောင်းခန့်သည်… မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် စေတီတစ်ဆူတွင်… လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အလုပ်ရှိလေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် စဉ်…စိတ်တူ/ကိုယ်တူ ပြောဆိုမွုအဆင်ပြေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွေ့ဆုံရသလို… အထက်ဖါး/အောက်ဖိ… ဂုန်းဆင်းဘီးတပ်… နောက်ကျောဓါး ဖြစ်ထိုးသည့်သူများနှင့်လည်း… တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ ကြည်စရာကြည်ပြာလေးများဖြစ်သော… ချိုချို၊ ခက်မာနွေး၊ အေးသီတာသိမ့်တို့ဖြစ်လည်း… ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအလုပ်တွင်… ဦးသောင်းခန့် မမြဲခဲ့ချေ ။
အောက်ခြေဝန်ထမ်းအချင်းချင်း… ညီညွတ်မျှတမွု မရှိသဖြင့်… ၄/၅လ,အကြာတွင်… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်ထွက်လိုက်လေတော့သည်။ ဦးသောင်းခန့် လင်မယားတွင် ငိုစား/ရယ်စား… ရတာနာလေးများ လည်းမရှိသည့်အတွက်…ရရှိသည့်… ပင်စင်လစာလေးဖြင့်… ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းကြသည်။ များမကြာမီ… ဦးသောင်းခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်… စေတီတွင်ဘုရားပွဲ တော်ကျင်းပလေသည်။ လင်မယားနှစ်ဦးတည်းသာနေထိုင်… ဦးသောင်းခန့်၏ နေအိမ်တွင်… ဦးသောင်းခန့်တစ်ဦးတည်း… အထီးကျန်နေသည်။ ဦးသောင်းခန့်၏ ဇနီးဖြစ်သူသည်… ဇာတိကျေးရွာတွင်… အမွေကိစ္စ လုပ်ဆောင်စရာရှိသည့်အတွက်… ဇာတိမြေသို့ ပြန်သွားသောကြောင့်… ဦးသောင်းခန့်မှာ… တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေသည့်… ဦးသောင်းခန့်သည်… နံနက်နိုးသည်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး ဘုရားဝတ်ပြုသည်။
ပြီးသည်နှင့် စားသောက်ချက်ပြုတ်သည်။ tvမှ သတင်းများနားထောင်သည်။ ကိုရီယားဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်သည်။ သီချင်းနားထောင်သည်။ တရားCDများဖြင့်… တရားနာသည်။ ပြီး… မျက်ခွံလေးလာသည့်အခါ အိပ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူရွာပြန်သွားသည်မှာ ၈ရက်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်။ အတူရှိနေစဉ်လည်း… အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာသည်ကို… အကြောင်းပြလျက်…ဖို/မ ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ချေ ။ ယနေ့…ဦးသောင်းခန့်… အိပ်ယာအဝင်စောခဲ့သည်။ အိပ်မက် မက်သည်။ မကိုးမကား… အမျိုးသ္မီးတစ်ဦးနှင့် ကာမ ဆက်ဆံသည်… ဟုမက်သည်။ လန့်နိုးလာသည့်အခါ… ဆီးကြောများ တင်းပြီးဆီးသွားချင်လာသည်။ သို့ဖြစ်၍… ဦးသောင်းခန့်သည် ရေအိမ်သို့သွားကာ ဆီးသွားသည်။ ထို့နောက် အိပ်ယာသို့ပြန်ကာ… ဝင်အိပ်သည်။ ဟိုလှိမ့်/ဒီလှိမ့် ဖြင့်… အိပ်မပျော်ပေ။ အိပ်မက်ထဲမှ အမျိုးသမီးကိုမျက်နှာ မသဲကွဲသော်လည်း… တဏှာစိတ်ဆိုသည်က… ပူးကပ်လာပြီဆိုလျှင်… ဖယ်ထုတ်လို့ မရချင်။ ထို့ကြောင့်ဦးသောင်းခန့်…အိပ်ရန် မကြိုးစားတော့ပေ။ အပြာကားကြည့်ပြီး လက်သမားလုပ်ရန်လည်း… နှမြောနေသည်။
သို့ဖြစ်၍ အိမ်တံခါးလုံခြုံစွာ သော့ခတ်ပြီး… အပြင်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့သည်။ အတန်ကြာ လမ်းလျှောက်မိသည့်အခါ… မီးရောင်ထိန်ထိန်ကို လှမ်းမြင်ရသဖြင့်… ဘုရားပွဲမှ မီးဖြစ်မည်ဟု… တွေးမိလေသည်။ အတွေးနှင့်အတူ ခြေဦးသည်လည်း ဘုရားပွဲဆီသို့… ဦးတည်သွားလေတော့သည်။ ပွဲဈေးတန်းနှင့်နီးလာသဖြင့်…လူသွား/ လူလာ စိပ်လာသည်။ ဈေးတန်းအတွင်း စဝင်မိသည်နှင့်… ဝဲ/ယာ မုန့်ဆိုင်များနှင့် ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းသည့် ဈေးဆိုင်များကို ငေးယင်း ကြည့်ယင်းဖြင့်… လူရေစီးချောင်းအတွင်း… စီးမျောသွားလေ၏။ အိုးကြီး/ အိုးလတ်/ အိုးငယ်များကိုလည်း ရှာဖွေကြည့်ရွု့မျက်စိကျွေးယင်း… လျှောက်လာခဲ့ရာ… နံမည်ကြီးဇာတ်ပွဲရုံတွေအနီး ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဆက်၍လျှောက်လာခဲ့ရာ… ဗလာပွဲနှင့် စတိတ်ရွိုးစင်များအနီးသို့… ရောက်လာပြန်သည်။
ရှေ့မှလျှောက်နေသည့်တောင့်တင်းသည့်… အိုးလတ်နှစ်လုံးသည်… ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည့်… စတိတ်ရွိုးလူအုပ်ကြားအတွင်းသို့… တိုးခွေ့ဝင်သွားကြသဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်ပစ်မှတ် ပျောက်သွားခဲ့သည်။ ရပ်ကြည့်ရန်လည်း အတန်ငယ်ဝေးနေ… စကားပြောသလိုလို သံချပ်ထိုးသလိုလို… မပီမသသီချင်းသံများကြောင့် စင်နှင့်နီးရာသို့ထပ်ရွေ့မိ၏။ တင်မာနွေးသည် စတိတ်ရွိုးကို စိတ်ပါဝင်စားနေစဉ် မိမိတင်ပါးကို လက်လာသရမ်းသဖြင့်… မသိမသာ နောက်သို့ငဲ့ကြည့်လိုက်ရာ… မိမိနှင့်အသက်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်းရှိမည့် အမျိုသားနှစ်ဦးဖြစ်နေသည်။ မသိဟန်ဆောင်လျက် ဆက်ကြည့်နေစဉ်… ပူပူနွေးနွေး အချောင်းဖြင့်… အထောက်ခံရလေသည်။ တင်မာနွေးသည်… အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ ၂နှစ် မပြည့်သေးချေ ။ ဖို/မ ဆက်ဆံရေးတွင်… ဘွဲ့ရတစ်ဦးအဆင့် မဟုတ်ပေမဲ့… အထက်တန်းအောင်ပြီး အဆင့်လောက်… အတွေ့အကြုံ ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နောက်မှထောက်နေသည့်… ပူနွေးနွေး အချောင်းကြီးသည်… ဘာဖြစ်သည်ဆိုတာကို သိသည့်အပြင်… ယခုထက် အဆင့်ကျော်လာနိုင်သည်ကိုလည်း… ရိပ်စားမိသဖြင့်… မိမိလည်း အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်… ရှောင်ထွက်နိုင်ရန်အတွက်… မသိမသာ မျက်လုံးကစားလျက် ထွက်ပေါက်ရှာနေ၏။ ထိုအချိန်မှာပင်… လက်တစ်ဖက်သည် မိမိဆီးခုံကို ထမိန်ပေါ်ကပင် လာစမ်းသဖြင့်… လက်သည်းဖြင့် ဆိတ်လိုက်ရသည်။ လူအုပ်၏အပြင်ဖက်တွင်… ဦးသောင်းခန့်ကို လှမ်းမြင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်… “အဘရေ…အဘ… သမီးဒီမှာ… ထွက်လာခဲ့မယ်…” ထွက်ဖို့ပြင်သည့်အခါ…အနောက်မှနေ… လက်မောင်းကို ဆွဲထားသြဖြင့်… “ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲ…ဟိုမှာ ငါ့ဘကြီး လာခေါ်နေပြီ… နင်တို့မလွတ်ယင် ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်…” ဦးသောင်းခန့်သည်အဘဟုခေါ်သံကို ကြားသော်လည်း… မိမိကိုခေါ်သည်ဟုမထင်ပေ။
သို့သော် အသံကိုကြားဖူးသလိုရှိသဖြင့် လှမ်းကြည့်ရာ… တင်မာနွေးကိုမြင်မိသွားသည်။ တင်မာနွေး၏ အခက်အခဲကိုလည်း ရိပ်မိလိုက်သဖြင့်… လူအုပ်အနီးတိုးကပ်သွားကာ… “ထွက်ခဲ့လေ…သမီး…အဘရှာလိုက်တာ…” ထိုအခါမှ…လူငယ်နှစ်ယောက်သည်… မလွတ်ချင်/လွတ်ချင်ဖြစ်…လွတ်ပေးလိုက်သည်။ တင်မာနွေးလည်း ရင်တုန်/ပန်းတုန်ဖြင့်… ကောက်ရိုးတစ်မျှင်… ကယ်တင်ရှင် ဦးသောင်းခန့်ရှိရာသို့… ထွက်လာနိုင်တော့၏။ “လာ…အဘ သွားမယ်…” ဟု…ပြောကာ…ဦးသောင်းခန့်၏ ညာလက်မောင်းကို ကိုင်လျက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ အတန်ငယ် လျှောက်လာသည့်အခါ … “ဟင်…အဘ,ဒီသီချင်း…သမီးကြိုက်တယ်… ခဏနားထောင်ကြည့်မယ်နော်…” ပြောလည်းပြော… ဦးသောင်းခန့်ကိုလည်း… ဆွဲခေါ်ကာ လူကြားအတွင်းသို့ တိုးဝင်လေသည်။ စင်နားနီးသဖြင့်… အတွင်းသို့ သိပ်မတိုးနိုင်ချေ ။
ရောက်သည့်နေရာ၌ပင် စင်ပေါ်ကို ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်ကို… အနောက်ဖက်တွင် ထားကာ… စင်ပေါ်ကိုငေးမောကြည့်ရွု့ယင်း… မိမိရှေ့တွင် လူကွယ်သည့်အခါ… ခြေဖျားထောက်ကာ ထောက်ကာ ကြည့်ရသည်။ ထို့ကြောင့် မကြာခဏ တင်မာနွေး၏တင်ပါးနှင့် ဦးသောင်းခန့်၏ဆီးခုံတို့ ပွတ်တိုက်မိကြလေသည်။ ပွတ်တိုက်မွုများလာသည့်အခါ တာဝန်အရ… လီးရမည်ဖြစ်သော်… အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူဖြစ်သည့်… ဦးသောင်းခန့်မှာ… တောင်သော်လည်း လူငယ်ကဲ့သို့… ထောင်မတ်မနေပေ။ မာမာတင်းတင်းတော့ ဖြစ်လာသည်။ တင်မာနွေးမှာ မကြာမီက ရွယ်သူလူငယ်နှစ်၏ ကိုင်တွယ်ခံရမွု… အထောက်ခံရမွုတို့ကို တွေ့ ကြုံခဲ့သော်လည်း… ကြောက်စိတ်ကြောင့် မည်သည့်ခံစားမွုမျှ မရှိခဲ့ချေ ။
သို့သော်… ယခုအခါ… ဦးသောင်းခန့်၏ မာမာအချောင်းကြီးဖြစ် မိမိတင်ပါး ပွတ်တိုက်မိသည့်အခါ… စိတ်လွုပ်ရှားလာမိသည်။ ခြေဖျားထောက်ကာ ထောက်ကာ ကြည့်ရသည့် အတွက်လည်း… တင်ပါးနှင့် မာမာအချောင်း ကြီးတို့၏ အထိအတွေ့ကိုနှစ်သက်လာသည်။ ဦးသောင်းခန့်သည် အသက်ကြီးလာသဖြင့်… အတွင်းဘောင်းဘီဝတ်လေ့ဝတ်ထ… မရှိတော့ချေ။ တင်မာနွေးကိုလည်း…စတင်တွေ့မိ… ခင်မင်စအချိန်ကတည်းက… တင်မာနွေး၏ စွင့်ကားလှပသော အိုးကြီးကိုကြည့်ပြီး… ပြစ်မှားနေသူ ဖြစ်သည်။ တင်မာနွေးသည်လည်း ဦးသောင်းခန့်နှင့် စတင်ခင်မင်မိကတည်းက… မိမိအပေါ် မရိုးမသားအကြည့်တို့ကို… သတိပြုခဲ့မိသော်လည်း… စိတ်ကထူးဆန်းစွာ သဒ္ဓါကြည်ဖြူနေမိသည်။
မိမိ၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည့်… ချိုချိုနှင့် အေးသီတာသိမ့်တို့ထံမှ ကြားသိရသည့်… ဦးသောင်းခန့်နှင့် ချိုချိုတို့ V.I.P.သန့်စင်ခန်းတွင်… ကာမဆက်ဆံမွု… အေးသီတာသိမ့်ပါ… ထိုသန့်စင်ခန်း၌ပင်… ဦးသောင်းခန့်နှင့် တဏှာလွန်ကျူးကြသည်များကို… ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ… ပြောပြခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက… ဦးသောင်းခန့်ကို တင်မာနွေး မသိစိတ်ကနေ သဒ္ဓါလွန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလိုမိမိတင်ပါးကို… ဦးသောင်းခန့်၏ မာမာအချောင်းကြီး အမြှောင်းလိုက် ကပ်နေသိအခါ… လိုလိုချင်ချင်ပင် ဖင်ကိုမသိမသာ နောက်ပစ်ပေးထားမိသည်။ ဦးသောင်းခန့်သည် အခြေအနေအစဉ်ပြေနေသဖြင့် တင်မာနွေး၏ပုခုံးကိုကိုင်ကာ မိမိဆီးခုံဖြစ် တင်ပါးကို ဖိကပ်ထားသည်။
တင်မာနွေးလည်း လက်နောက်ပစ်၍ ဦးသောင်းခန့်ခါးကို ကိုင်ထားသည်။ ကြာလာသည့်အခါ တင်မာနွေး၏ ပိပိအတွင်းဝယ် ကာမရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တို့ ယိုဖိတ်လာလေတော့သည်။ “အဘ လူသိပ်ကြပ်လာပြီ…ပြန်ကြရအောင်နော်..” တင်မာနွေးသည်ပြောဆိုပြီးနှင့် လူအုပ်ကြားမှ တိုးထွက်နေသဖြင့်.. တင်မာနွေး လူအုပ်ကြားအတွင်းမှ တိုးထွက်သွားသဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်လည်း နောက်ကနေ လိုက်သွားရလေ၏။ “အဘ ဗိုက်ဆာတယ်…တစ်ခုခုသွားဝယ်ရအောင်…” တင်မာနွေးမုန့်ဈေးတန်းသို့… သွားသဖြင့် လိုက်ရပြန်သည်။
တင်မာနွေးသည် ရေမုန့်ဆိုင်တွင်… ရေမုန့်အနည်းငယ်ဝယ်ပြီး… ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ဆိုင်တွင်… ကောက်ညှင်းကျည်တောက် ဝယ်ပြန်သည်။ ထို့နောက်…ရေသန့်၎ဗူးနှင့် တစ်ရွုး ၂လိပ်ဝယ်ပြီး… “လာလေ…အဘ…သွားကြရအောင်……” တင်မာနွေး ခေါ်ရာနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင်… ဦးသောင်းခန့် တစ်ယောက်လိုက်မိချေပြီ။ အတန်ငယ်သွားပြီးနောက်… ကတ္တရာလမ်းမှ သွေဖည်ကာ… အနီးရှိစက်ရုံကြီး တစ်ခုသွားရာလမ်းကို… တင်မာနွေး ဦးတည်လိုက်သဖြင့်… ဦးသောင်းခန့်လည်း… သို့လော/သို့လော တွေးရချေပြီ။ ထိုလမ်းသည် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ… နေထိုင်သူများ အချို့သာ အသုံးပြုသောလမ်းဖြစ်လေသည်။ အန္တ ရာယ်မရှိသော်ငြားလည်း… လူသွား/ လူလာ ကြဲ သောလမ်းဖြစ်လေသည်။
ကားမှတ်တိုင် ၂တိုင်လောက်အကွာ အဝေးရှိမည့် နေရာအရောက်တွင်… ပိတောက်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိလေသည်။ ထိုပိတောက် ပင်စည်ပတ်လည်ကို… သစ်သားခုံပတ်လည်း ရိုက်ထား၏။ “အဘ…ဒီမှာခဏအမောဖြေယင်း… မုန့်စားကြရအောင်နော်…” ဦးသောင်းခန့်လည်း…အိမ်မှ စထွက်ကတည်းက… မထိုင်ရသေးသဖြင့်… ဟန်ပင်မဆောင်နိုင်… ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ “အဘ တော်တော်မောသွားလား?” “မောတာပေါ့ သမီးရယ်…အိမ်ကနေ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တာလေ… ပွဲခင်းထဲလဲ မတ်တပ် မတ်တပ်နဲ့… ဒီရောက်မှပဲ ထိုင်ရတော့တာ…” အဘက လူကသာမောတာနော်… အခုနက အဘ ပစ္စည်းကြီးက…အဟင်းဟင်း..”
“အေးကွယ်…သမီးတင်ပါးကြီးကလဲ အိနေတာပဲ ဆိုတော့…” “သိပါတယ်နော်…အဘအလုပ်ဝင်ကတည်းက… သမီးကိုရွိုးနေတာ…” “အေးကွယ်…သမီးက ခါးလေးသိမ်ပြီး… ရင်ရော/တင်ကော လှတဲ့အပြင်… မျက်နှာလေးကပါ ချစ်စရာကောင်းနေတာကိုး…” “အဘသိပ်မြှောက်မနေနဲ့…ဒီမှာဝယ်လာခဲ့တဲ့ မုန့်တွေစား…” တင်မာနွေးသည်စားဦးစားဖျား ရေမုန့်ကို… ဦးသောင်းခန့် အား လှမ်းပေးသည်။ တင်မာနွေး ကိုယ်တိုင်လည်း… ရေမုန့်စားလေသည်။ ရေမုန့်မှာ အရသာရှိသော်လည်း… ဗိုက်မပြည့်သည့်အတွက်… ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ကို… ဆက်စားကြသည်။
တင်မာနွေးမှာ အစားစားစဉ်… နင်မှာစိုးရိမ်၍… ရေ တစ်ကြိမ်… နှစ်ကြိမ်သောက်သော်လည်း ဦးသောင်းခန့်ကတော့… အစာစားပြီးမှ… ရေသောက်လေသည်။ “အဘ ဗိုက်ပြည့်ပြီး…ဗိုက်လေးသွားပြီ… အဘပေါင်ပေါ်မှာ… ခဏ လှဲမယ်နော်… အဘဟာကြီး တောင်နေသေးလား…” တင်မာနွေး သည် ဦးသောင်းခန့်၏ ပေါင်ပေါ် လှဲအိပ်ယင်း… လီး ကိုလှမ်းကိုင်ကြည့်သည်။ “ဟင်…အခုကျတော့…သူမဟုတ်သလိုပဲ…” ပုဆိုးပေါ်ကနေ…လီးကိုကိုင်ယင်းပြောနေသည်။ “အာငွေ့ပေးလိုက်မယ်နော်…အဘ” ပြောလည်းပြော… ပုဆိုးကိုလည်း ဆွဲလှန်လိုက်၏။ တင်မာနွေး၏အာငွေ့ကြောင့်လည်းကောင်း ပုလွေမွုတ်မွုကျွမ်းကျင်မွုကြောင့်လည်းကောင်း အဖိုးကြီး ဦးသောင်းခန့်၏လီးသည် မယုံနိုင်စရာ တောင့်တင်းမာကြောလာလေသည်။
ဦးသောင်းခန့်သည်လည်း တင်မာနွေး မိမိပေါင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းလျက် မိမိလီးကိုပုလွေမွုတ်နေစဉ်ကပင် တင်မာနွေး၏ နို့အုံနှင့်တင်သားအစိုင်အခဲကြီးများကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်နေခဲ့သည်။ “နွေးရယ်..ဘာဂျာမွုတ်ချင်လိုက်တာ……” ဟု..ဦးသောင်းခန့်က တင်မာနွေးကို တိုးတိုလေး ကပ်ပြောလေသည်။ “အူး..အဘ သဘောပဲလေ….” လီးကိုငုံလျက်ပုလွေပေးမပျက် တင်မာနွေးက ဖြေလိုက်သည်။ ဦးသောင်းလည်း တင်မာနွေး၏ ထမိန်စကိုခါးပေါ်ထိဆွဲလှန်တင်လိုက်ပြီး တင်သားတင်းတင်းရင်းရင်းများကို၊ လျှောက်နမ်းလျှောက်စုပ်ယင်း၊ ပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း ဖွဖွလေးလက်ပူတိုက်နေ၏။ တင်မာနွေးလည်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုမသိမသာ ကားပေးလိုက်သည်။
ဦးသောင်းခန့်ကလည်း ပွင့်အာလာသည့် စောက်ဖုတ်နွုတ်ခမ်းသားများကို၊ လျှာဖြင့် လျှက်လေတော့သည်။ ဖင်တုံးကြီးများကိုလည်း၊ ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ ပုလွေကောင်းမွုကြောင့် မာတောင်တောင့်တင်းလာသည့် လီးကြီးဖြင့်၊ တင်မာနွေး၏စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လိုးချင်လာသလို၊ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနှင့် စောက်စိတို့ကိုစုပ်/မွုတ်/ လျက် လုပ်ပေးမွုကြောင့် ထွက်ရှိလာသည့် စောက်ရည်များကိုလည်း တပြတ်ပြတ်လျှက်ကာ၊ အလိုးကြီးလိုးကြရန်၊ နှစ်ဦစလုံးထန်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ “ကလေး….အဘ..လိုးတော့မယ်ကွာ….. ဒီ ခုံပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီးအဘ ဖက်ကိုဖင်ပေးထား……” တင်မာနွေးသည်.. ဦသောင်းခန့်နေခိုင်းသည့်အတိုင်း.. ပိတောက်ပင်ကိုမျက်နှာပြကာ ဦးသောင်းခန့်ကို ကျောပေးလျက်.. ထမိန်ကို ခါးထိဆွဲတင်ထားသည်။
ဦးသောင်းခန့်သည်မတ်တပ်ရပ်လျက် ခုံပေါ်တွင် မိမိကိုကျောပေးလျက် အလိုးခံရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည့် စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ မိမိလီးကိုလျှောကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ ” ဗြစ်…..ဗြွတ်..,ဗြွတ်…..” အသံနှင့်အတူ….လီးကြီးသည် စောက်ဖုတ်အတွင်းနွုတ်ခမ်းသားကို.. ပွတ်တိုက်ချိတ်ဆွဲကာ.. အဆုံးဝင်ရောက်သွားလေတော့သည်။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရကိုင်ကာ.. ခပ်သွက်သွက်ကလေးဆောင့်လိုးမွုကြောင့်…. ” ဖွတ်…ဖတ်….ဖတ်…ဗြွတ်….ဖွတ်…..” စည်းချက်သံနှင့်အတူ… ” အား….အင့်..အင့်..အဟင့်ဟင့်…အူး….” ဖီးလ်..တက်သံထွက်လာသည်။ “အင်း..အု…အု…ဆောင့်..အဘ….ဆောင့်..ဆောင့်.. မီးပြီးတော့မယ်…. အိုး…ကောင်းလိုက်တာရှင်….” တင်ပါးကိုနောက်သို့ အစွမ်းကုန်တိုးကပ်ထားယင်း… တင်မာနွေး.. တစ်ချီပြီးလေပြီ။ ဦသောင်းခန့်ကလည်း လီးကိုအဖုတ်အတွင်းသို့.. တင်းကြပ်စွာ ဖိကပ်လျက်.. မွေပေးနေ၏။ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကိုလည်း ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ယင်း.. လီးကိုဖြေးညှင်း စွာအထုတ်/ အသွင်းပြန်လုပ်လေသည်။
တဏှာစိတ်တက်နေသည့်တင်မာနွေးက “အဘ….သမီးကိုနမ်းပါအုန်း….” အရှိန်ဖြေးစွာထိန်းလိုးနေယင်း…တင်မာနွေး၏နွုတ်ခမ်းကို ဆွဲယူစုပ်နမ်းလေတော့သည်။ နှစ်ဦးသား အားရအောင်ကစ်ဆင်ဆွဲပြီးနောက်.. နို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်လျက် အရှိန်ပြင်းစွာ လိုးလေတော့သည်။ “အား…လိုး…လိုး..အဘ….အဘ..လရည်တွေ ထွက်လာအောင်.. နာနာတာဆောင့်လိုးပါအဘရယ်…..” “ဗြစ်…ဖွတ်..ဖတ်ဖတ်……….” လိုးသံများနှင့်အတူ. တင်မာနွေး.စောက်ခေါင်းအတွင်း၌ ပူကနဲ..ပူကနဲဖြစ်ကာ.. သုတ်ရည်များဝင်ရောက်လာတော့သည်။ “အင့်…ဟင့်ဟင့်…သ..သမီးလဲ..ထပ်..ထပ်ပြီးပြန်ပြီတော့….” ဦးသငေ်းခန့်နင့်တင်မာနွေးတို့သည် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဝက်မှိန်း မှိန်းနေကြကာ အဖုတ်အတွင်းလီးကိုစိမ်လျက် တစိမ့်စိမ့်အရသာခံစားနသေလို လီးကို အစိမ်ခံလျက် စောက်ဖုတ်ကလည်း လီးအရသာကို တ‌မြေ့‌မြေ့ခံစားနေကြလေသည်။ အတန်ငယ် အမော‌ပြေ၍ လီးကပျော့ခွေထွက်ကျလာမှသာ “အဘ ရေဆေးကြရအောင်နော်” အေးလေ ဆေးကြတာပေါ့” နှစ်ဦးသားရသေန့်တစ်ဗူးစီကိုင်လျက် ပိတောက်ပင်အနီးဝန်းကျင်တွင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ကြလေတော့သည်။
ရေဆေးပြီးသွားသည့်အခါ မူလခုံပေါ်တွင် ပြန်ထိုင်ကြလေသည်။ “ချိုချိုပြောတာမှန်တယ် အဘရဲ့” “ဘာလဲဟ နင်ကလဲ အရင်းမရှိ အဖျားမရှိ” “ဟီး ဟီး အဘကလဲ ချိုချိုက‌ သမီးကို ‌ပြောပြတယ် အဘက အသက်ကြီးပေမဲ့ လိုးနိုင်တုန်းပဲတဲ့” “အော် သမီးရယ် မလိုးရတာ နဲနြဲကာသွားပြီလေ သမီးကလဲ အစစအရာရာ စွဲဆောင်မွု ကောင်းနေတော့ နောက်တစ်ချီတောင် လိုးချင်သေးတယ်” “အောင်မယ် အောင်မယ် ကြိုတင်စရံ ချိတ်နေပြန်ပါပြီနော်” “အဟုတ်‌ပြောတာသမီးရဲ့ သမီး တင်တွေ ရင်တွေကတင်း တင်းရင်းရင်းနဲ့ အချိုးကျကျလေး ဖြစ်နေတော့ အဘလေ သမီးကို လိုးပြီးယင်း လိုးချင်ပဲကွာ” ဦးသောင်းခန့်သည် စကားတ‌ပြော‌ပြောနှင့် ဘယ်ဖက်ဘေးတွင် ကပ်ထိုင်နသေည့် တင်မာနွေး ၏နို့အုံကို အင်္ကျီအပေါ်ကနေ ဆုပ်နယ်နေတော့သည် ။
“အဘ ချိုချိုနဲ့ ဘယ်နှယ်ခါတောင် လိုးပြီးပြီလဲ” “ဟာ ညည်းကလဲ လစ်ယင်လစ်သလို တွေ့နေကြတာ ဘယ်လိုလုပ် မှတ်မိမှာလဲ” “ဒါဆို အေးသီတာသိမ့်ကို လိုးတာလဲ မရေတွက်နိင်တော့ဘူးပေါ့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အဘ” တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်၏လီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ဆွဲကိုင်ကာ ညှစ်ဆွဲ ဆွဲလိုက်သဖြင့် “အ–အ–‌ဖြေး‌ဖြေးလုပ်ပါဟ” ဦးသောင်းခန့်သည် ချော်လဲ လဲထိုင်လုပ်၍ တင်မာနွေးအဖုတ်ကို ညာလက်ဖြစ်နွိုက်လိုက်သည်။ ထမိန်အပေါ်ကနေ အဖုတ်ကို လျောတိုက် ပွတ်တိုက်နသေည့်အပြင် ဘယ်လက်ကလည်း တင်မာနွေး ၏ ဘယ်နို့အုံကို ဖျစ်ညှစ်နယ်ဖတ်နေသည်။ “အို အဘ နော် သမီး အဝတ်အစားတွေ ‌ကြေမွကုန်ပါပြီ… ဟာ မရဘူး မရဘူး အဘ လဲ အဝတ်အစားတွေချွတ် သမီးလဲ ချွတ်မယ်” တင်မာနွေးသည်ဦးသောင်ခန့်လက်များကို တွန်းဖယ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ကာ ကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစားကို ချွတ်လသေည်။
ဦးသောင်းခန့်လည်း တင်မာနွေး၏ ကိုယ်လုံးတီးအလှကို ရင်သပ်ရွုမောစွာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ “ဟာ—-အဘ ချွတ်လေကွာ သူများဟာကို လာငမ်းနေသေးတယ်” ဦးသောင်းခန့်လည်း ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ ခုံေါ်တင်လိုက်သည်။ ” ကြည့် လူလည်ကြီး အင်္ကျီကျတော့ မချွတ်ဘူး” “လာပါ သမီး ရယ် အဘ ဂျာချင်နေပြီ ” ” အဘ နော် သမီး ကို ငရဲမပေးနဲ့” ” ငရဲမပေးဘူး လျှာပေးမှာ ဟ ” တင်မာနွေးခုံပေါ်ထိုင်သည်နှင့် ဦးသောင်းခန့်သည်‌ မြေပေါ်ဒူးထောက်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို ခေါင်းဝင်ရလောက်လေးတော့သည်။ ” အိုး—ဘယ်လိုမှလဲ ‌ပြောမရ ဆိုမရ အင့်_အ.အ–အိုး———” လက်မ နှစ်ဖက်ဖြင့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြဲကာ လျှာဖြင့် အထက်/အောက် စုန်/ဆန် ဂျာလေတော့သည်။ ” အိုး–စုပ်–စုပ်–အစိကိုပါ သိမ်းကြုံးစုပ်လိုက်စမ်းပါ အဘ ရယ် ” တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်၏ ဆံပင်များကို ဆုပ်ကိုင်ယင်း ဖင်ကြီး‌မြှောက်ကြွ‌မြှောက်ကြွဖင့် ကာမ အရည်များထွက်ရန် တာစူနေပြီဖစ်သည်။
ဦးသောင်းခန့်က အစိကိုစုပ်ယင်း နို့သီးခေါင်းလေးများကို ပွ‌တ်‌ခြေသောအခါ တင်မာနွေးမှာ ထွန့်ထွန့်လူးလျက် ” အီး——ဟ,ဟ–ပြီးပြီ အဘ‌ရေ ပြီးပြီ ” အဖုတ်အတွင်းမှထွက်ကျလာသည့် သုတ်ရည်များ ဦးသောင်းခန့်လျာဖြင့် ကြုံးလျှက်လေတော့သည်။ စောက်ရည်များမစင်တစင် အချိန်တွင် ဦးသောင်းခန့်သည် မတ်တပ်ထရပ်ပြီး သုတ်ရည်အရသာ‌ကြောင့် အနည်းငယ်မာလာသည့် လီးကို ဂွင်းထုခိုင်းလသေည်။ တင်မာနွေးလည်း ဂွင်းထုပေးယင်း ကစ်ဆင်ဆြွဲကလသေည်။ ငယ်ရွယ်တောင့်တင်းသည့် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို ထပ်မံလိုးရတော့ မည်ဆိုသော အသိစိတ်‌ကြောင့် လီးသည် မကြာခင် မာ‌ကြောလာလေသည်။
တင်မာနွးလည်း ကစ်ဆင်ဆွဲနေစဉ် အဘပါးစပ်မှ မိမိစောက်ရည်နံ့တွေကို ရနေ၏။ ခဏ အကြာတွင် ကစ်ဆင်ဆြွဲခင်းကို နားလိုက်ကြပြီး လိုးရန်ပြင် ကြတော့သည်။ ဦးသောင်းခန့်သည် တင်မာနွေး ၏ညာ‌ခြေကို မိမိဘယ်ပုခုံးပေါ် ထမ်းလိုက်သည်။ မိမိညာ‌ခြေကို ခုံပေါ်အားပြုလိုက်သည်။ ဟ,ပြဲဖြစ်သော စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့လီးထည့်ရန်ကြိုးစားစဉ် တင်မာနွေးက အလိုက်သိစွာ လီးကိုလှမ်းကိုင်ပြီး အဖုတ် ဝတေ့ပေးလေသည်။ ပွင့်အာနသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ဇွပ် –ဗြွတ် အသံနှင့်အတူ လီးက ‌ဖြောင့်တန်းစွာ ဝင်ရောက်လေတော့သည်။ အရှိန်ပြင်းစွာ တစ်ချက် အဆောင့်တွင် ” အွတ်–အင့် အင့် အ ဘ ချိုချိုနဲ့ အေးသီတာသိမ့်တို့ကိုရော ဒီလိုပဲ ဆောင့်လိုးသလား ” “အင်း တခါတလေတော့ ဆောင့်လိုးဖြစ်တာပေါ့ ”
“ဟုတ်–အင်း–သမီး လဲ အဘ တချက်တချက် ဆောင့် ဆောင့် လိုးတာ– အ– ခံ ခံ လို့ကောင်းတယ်ရှင့်—” ဦးသောင်းခန့်သည် နို့ကိုပါ ကုန်းစို့လိုက်သဖြင့် “အိုး——သ သ မီး ပြီ ပြီး ပြန်ပြီတော့——” တင်မာနွေးသည် ဦးသောင်းခန့်ခါးကို မမှီတမှီ လှမ်းဖက်ကာ နောက်ပေါင်တစ်ချောင်းကိုပါ ညာပုခုံးပေါ်တင်လိုက်သဖြင့် ဦးသောင်းခန့်လည်း ညာ‌ခြေကို အောက်ချလိုက်ရလေသည်။ အတင်းကာရော ဆွဲဖက်ထားကြသဖြင့် ဆီးခြုံခင်း ထိကပ်နေတော့၏။ နှစ်ဦးစလုံးစည်းချက်ညီညီ ဖင်ဝှေ့နေကြတော့သည်။ ထို့နောက် ဦးသောင်းခန့်က ‌ဖြေး‌ဖြေးမှန်မှန်လေး ပြန်လိုးယင်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့သုတ်ရည်ပူများ ပန်းထုတ်နိုင်ရန် ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးရပြန်သည်။ ” အိုး—အင့် အင့် အ အင်း ဟင်း ပြီး ပြီး လိုက်တော့ အဘ——” ပူကနဲ ပူကနဲ သုတ်ရည်များ အဖုတ်အတွင်းဝင်ချိန်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာတင် တင်မာနွေးလည်း တစ်ချီထပ်ပြီးပြန်သည်။ အတော်ကြာကြာ အနားယူကြပြီးနောက် တင်မာနွေးကို ခုံပေါ်တွင် ပုဇွန်ထုပ်ကွေးခိုင်းလျက် စိမ်လိုးကြပြန်လေပြီ။ ဦးသောင်းခန့်သည် ဤကဲ့သို့ သမီးအရွယ် ‌မြေးအရွယ်ကလေးမလေးသုံးဦးအား လိုးခဲ့ရခြင်း‌ကြောင့် မရွယ်ပဲ စော်ကဲမင်း ဖြစ်ခဲ့ရလေသည် ………ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပွီးလိုကျတော့အဘ